China Elekere 70 Watt China Manufacturers & Suppliers & Factory
Elekere 70 Watt - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Elekere 70 Watt)
Light Watt 70 Watt 80 Watt 5000k
Igwe ọkụ mmiri nke Watt 70 anyị nwere ike ịnwe ọmarịcha 8400lm. Ìhè Igwe Ọdụdọ A Nwere Ruo 80 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ. Ọkụ a na-enwu n'iche ọkụ nke 70w nwere eriri igwe anaghị agbazi, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ịchọrọ. Site na ntulee...
The Topaz Ufo High Bay 150W na-enye ihe dị ịtụnanya 19500 lumens.Nke Rab Ufo High Bay na- eme ka arụpụta ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ọ bụla na-arụ, ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ugbo, ụlọ ahịa azụmahịa na ihe ndị ọzọ! Mmiri Elu Mmiri Ufo nke 150 na Watt ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe nhicha na-ehicha....
50 Watt Anyanwụ Street Light 5000k 2700lm
Ìhè Ìhè nke 50 nke Watt bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. Nke a bụ ìhè anyanwụ anyanwụ 50w maka ebe a na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, okporo ụzọ na ụzọ dị elu. Ihe Omuma nke Mbara Igwe nwere otu oghere nke dị na mbara igwe nke wuru na batrị lithium na usoro nchịkwaghachi na-enye ọnọdụ...
Elekere 70 Watt Ejiri Ike Mmiri 150 Watt Led Street Light 150 Watt Ihu Igwe Ibe Mmiri Late 75 Watt Led Street Light Wattage Ìhè Ifufe 300 Watt 100 Watt Led Edere ya na ìhè